Unyanzvi hwekuziva uye maitiro ekudzidza | Kuumbwa uye kudzidza
Unyanzvi hwekuziva uye maitiro ekudzidza
Maria Jose Roldan | | Maitiro ekudzidza
Hunyanzvi hwekuziva njere dzakateedzana hunyanzvi hune vanhu kana zvasvika pakutora rumwe ruzivo. Aya hunyanzvi hunosanganisira kushandiswa kwekutarisa, ndangariro, kugona, uye kufunga kwekufungidzira. Kufunga kwemunhu kunounza pamwechete nhevedzano yezviito kana maitiro senge kubatwa uye kududzirwa kwezvimwe zvinokurudzira, kuchengetedza kwavo mundangariro nemhinduro inotevera.
Unyanzvi hwekuziva hwakanangana zvakananga nehungwaru, kudzidza uye kusimudzira kwemunhu. Izvo zvakakosha kana zvasvika pakuona kuti munhu akati anokwanisa kukura pakufunga uye nekuziva uye kukwanisa kusangana nezviitiko zvakasiyana zvinomuka muhupenyu hwake hwese.
1 Unyanzvi hwekuziva hunogona kuiswa mumapoka
2 Kuziva hunyanzvi makirasi
3 Mienzaniso yekuziva kugona kana hunyanzvi
Unyanzvi hwekuziva hunogona kuiswa mumapoka
Unyanzvi hwekuziva hunogona kuiswa mumapoka mana akasiyaniswa:
Chikamu chekutanga chine fungidziro yechimwe chiitiko. Munhu wacho anokwanisa kucherechedza zvakadzama mhedzisiro inouya yekutora chimwe chiitiko. Kana zvataurwa zvikaitika zvisina kutarisirwa, munhu wacho anogona kumira chero nguva kubva pakuita zvakataurwa. Kufanoona kwakakosha uye kwakakosha kwazvo kuitira kuti munhu agarisane pasina dambudziko mukati mevanhu.
Chikamu chechipiri chinozivikanwa sekuronga uye hachisi chimwe chinhu kunze kwekugona kwemunhu kufanoona mhedzisiro yeramangwana inotorwa nezviito zvakatorwa. Kugona uku kwakakosha kumisikidza nhevedzano yezvinangwa muhupenyu.
Kuongorora chikamu chechitatu cheunyanzvi hwekuziva. Izvo ndezve kugona kwemunhu kuti akwanise kuongorora chimwe chiitiko uye kuti kana kwete kana kuchigadzirisa kuti usvike pane chaunoda poindi.
Kugadziridza chikamu chekupedzisira chehunyanzvi hwakadai uye chinosanganisira kugona kutsvaga dzakateedzana dzimwe nzira kuzadzisa zvinangwa zvakatemwa kana kusetwa. Munhu wacho anotora zviitiko zvekare uye kubva ipapo anoita kuti asvitse zvibodzwa zvakadaro muhupenyu hwake hwese.
Kuziva hunyanzvi makirasi
Kune makirasi maviri kana mhando dzekuziva kugona.
Yekutanga hunyanzvi hwekuziva saizvozvo uye ndizvo zvinobvumidza munhu kuti awedzere ruzivo. Aya hunyanzvi ndeaya anotevera:
Kugona kushandira kana kutora mamwe mashoko.
Kunzwisisa kana kugona kunzwisisa izvo zvakatorwa.
Kujekeswa kweimwe mhinduro zvisati zvaonekwa.
Kuyeuka izvo zvakararama kushanda sehwaro hwezviitiko zvenguva yemberi.
Metacognitive hunyanzvi ndewechipiri rudzi rwekuziva kugona kuripo uye Vanotendera munhu kudzora, kuziva uye kugadzirisa akasiyana maitiro ekuziva. Icho hachisi chimwe chinhu kunze kwekugona kudzidza.
Mienzaniso yekuziva kugona kana hunyanzvi
Tevere isu tiri kuzokuratidza mimwe mienzaniso yekuziva kugona:
Ruzivo rwemitauro kugona kwemunhu kubata mashandisirwo emutauro pasina matambudziko. Inogona kusanganisira girama, lexicon, kana syntax.
Iko kugona kwekutarisa kunosanganisira mukana wekunzwisisa kupfuura izvo vamwe vanhu vanokwanisa kuona. Inosanganisira zvinhu zvakaita sekumhanyisa kana kumhanya kana uchipindura mumwe mubvunzo.
Iko kugona kwekubvisa hachisi chinhu chinopfuura kugona kwemunhu kududzira masisitimu akaomarara pane epfungwa uye vashandure mumashandiro akareruka uye akaomarara. Iyi ndiyo kesi yekufungidzira kana kufunga kwemasvomhu.
Iko kugona kwekubvisa kana kugona kwemunhu kuti akwanise kuisa mamiriro akasiyana mamiriro. Inenge iri nyaya yekufunga zvine musoro kana zvine hungwaru.
Muchidimbu, Kugona kwekufunga kugona uye kugona kwepfungwa izvo vanhu vanofanirwa kunzwisisa nyika yakavapoteredza. Aya hunyanzvi hwakakosha kana zvasvika pakugadzirisa akasiyana masisitimu ane hukama neshungu shanu dzakadai sekuona, kunzwa, kunhuwidza, kuravira nekubata. Iyo seti yehunyanzvi hwakadai inogadzira kugona kwehungwaru uko vanhu vanako. Unyanzvi hwekuziva hunodzidzisa kudzidza uye kufunga, nenzira iyi isu tine chokwadi cheizvo zvatiri kudzidza uye nzira yakanakisa yekukudziridza nekuishandisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kuumbwa uye kudzidza » Studies » Maitiro ekudzidza » Unyanzvi hwekuziva uye maitiro ekudzidza
Kudzidza nguva kuronga